Iqhwa elimnandi okanye i-Acetate yeSodium
I-acetate ye-sodium okanye iqhwa elitshisayo yimichiza emangalisayo ongayilungisa kwi-baking soda kunye neviniga. Unokupholisa isisombululo se-acetate ye-sodium ngaphantsi kwendawo yokuqhafaza kwaye wenze ukuba amanzi adibanise. I-crystallization yinkqubo yokuxakeka, ngoko-ke i-ice-result is hot. Ubungqina be-solidification bwenzeka ngokukhawuleza ungenza imizobo njengoko uthulula iqhwa elishisayo.
I-Acetate yeSodium okanye i-Hot Ice Materials
1-litre iviniga ecacileyo (i-acid acetic acid)
Iipuniwe ezine-baking soda (sodium bicarbonate)
Lungisa i-Acetate ye-sodium okanye i-Hot Ice
Kwipuphu okanye i-beaker enkulu, faka i-baking soda kwiviniga, encinci ngexesha kwaye uvuselele phakathi kwongeziweyo. I-baking soda kunye neviniga iyenzeka xa yenza i-acetate ye-sodium kunye ne-carbon dioxide gas. Ukuba awufaki i- baking soda ngokukhawuleza, uya kubakho ukufumana i- soda ye-baking kunye ne-viniga , inokukhupha isitsha sakho. Uyenze i-acetate ye-sodium, kodwa iyancipha kakhulu ukuba incedo kakhulu, ngoko kufuneka ususe uninzi lwamanzi.
Nantsi impendulo phakathi kwe-baking soda kunye neviniga ukuze kuveliswe i-acetate ye-sodium:
Na + [HCO 3 ] - + CH 3 -COOH → CH 3 -COO - Na + + H 2 O + CO 2
Ubilise isisombululo sokugxila kwi-acetate ye-sodium. Unokususa kuphela isisombululo ekushiseni emva kokuba une 100-150 ml yesisombululo esisele, kodwa indlela elula yokufumana iziphumo ezilungileyo kukubilisa nje isilombululo kuze kube yilapho isikhumba sekristal okanye ifilimu iqala ukwenza phezu komhlaba. Oku kwandithatha malunga neyure kwisitofu phezu kobushushu obuphakathi. Ukuba usebenzisa ubushushu obuncinci awunako ukufumana umbane omnqatha okanye omnyama, kodwa kuya kuthatha ixesha elide. Ukuba ukukhutshwa kwebala, kulungile.
Emva kokuba ususe isisombululo se-acetate sodium kwi-heat, khawuleza usigubungele ukukhusela nayiphi na i-evaporation. Ndaphalaza isisombululo sam kwisitya esisodwa kwaye ndawugubungela ngeplastiki. Akufanele ube naluphi na ukristal kwisisombululo sakho. Ukuba unayo i-crystals, gubungela inani elincinci lamanzi okanye iviniga kwisisombululo, ngokwaneleyo ukutshabalalisa i-crystals.
Beka isitya esityhidiweyo sesisombululo se-acetate sodium kwifriji yokutshisa.
Imisebenzi ebandakanya iHla eliHla
I-acetate ye-sodium kwisisombululo kwifriji ngumzekelo werhasi elingu-supercooled . Oko kukuthi, i-acetate ye-sodium ikhona kwifom yefayili ngaphantsi kwesiqhelo sayo sokuqhaqha. Unokuqalisa ukristallisi ngokufaka i-crystal encinci ye-acetate ye-sodium okanye mhlawumbi ngokuchukumisa umgangatho wesicombululo se-acetate nge-soon okanye ngomunwe. I-crystallization ngumzekelo wenkqubo exotherm. Ukushisa kuyakhululwa njengefomu 'yeqhwa'. Ukubonisa ukugqithisa, ukudibanisa kunye nokufudumala kwelanga:
Ukulahla i-crystal kwisitya se-acetate ye-sodium. I-acetate ye-sodium iya kudibanisa ngaphakathi kwemizuzwana, isebenza ngaphandle apho uyongeza khona i-crystal. I-crystal isebenza njengendawo ye-nucleation okanye imbewu yokukhula kristal ngokukhawuleza. Nangona isisombululo siphume ngaphandle kwefriji, ukuba uyachukumisa isitsha, uya kufumanisa ukuba seshushu okanye eshushu.
Phalaza isisombululo kwisitya esingenanto. Ukuba i-ice efudumeleyo ayifuni ukuqala ukudibanisa i-crystallization, ungayichukumisa ngekristal ye-acetate ye-sodium (unokudla ngokukhawuleza i-acetate ye-sodium ukusuka kwicala elisetyenziswe ngaphambili). I-crystallization iya kuqhubeka ukusuka kwisitya ukuya apho uhambisa khona amanzi. Unokwakha iindonga zokutshisa iqhwa. Iinqaba ziya kufudumala kumgca.
Uyakuncibilikisa i-acetate ye-sodium kwaye uyayisebenzisa kwakhona ukubonisa.
KuKhusela kweHla eliHla
Njengoko ungalindela, i-acetate ye-sodium yikhemikhali ekhuselekileyo yokusetyenziswa kwimiboniso. Isetyenziswe njengesongezo sokutya ukuphucula i-flavour kwaye yikhemikhali esebenzayo kwiipakethe ezininzi ezishushu. Ukushisa okuveliswe yi-crystallization yesisombululo se-acetate yefriji yefrijini akufanele kubonise ingozi yokutshisa.
Indlela yokugcina i-Halloween Jack o Lantern
Indlela yokwenza i-Homemade Hair Detangler
I-Briggs-Rauscher i-Oscillating Color Change Change
Indlela yokwenza uMboniso weDancing Gummi Bear
I-Potassium Chlorate evela kwiBleach kunye neTransitenti
Indlela yokwenza i-Crystal Rose
'Uvuyo kwihlabathi' ngesiSpanish
Indlela yokudibanisa i-'Arrêter '(ukuMisa; ukuBamba)
Ngubani Ingelosi Elalikhokela UMoses Ngethuba Lokuphuma?
UKelly Clarkson Biography kunye neProfayili
Indlela yokwenza uVinegar owenzayo
Kuninzi Kangakanani ukufaka isicelo kwiKholeji?
Ukujonga kwi-Architecture Style Style
I-Volleyball Ipholile phantsi
Imifanekiso yaseRoyal Birkdale
Famous Scientist Izithombe - Amagama C
I-Dependre - Ukuxhomekeka (ngomhla)
11 Eyona ndlela ibhetele yokubukela iiKhathuthi
Artículos prohibidos para traer i-Estados Unidos
Kutheni Ulwaphulo-mthetho luya kuLwandle?
I-Ipso, iMeso, kunye nee-Peri Izikhundla kwi-Organic Chemistry
I-Widener University - iDelaware Admissions